U San Lwin, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar presents credentials as Permanent Representative of the Republic of the Union of Myanmar – Ministry of Foreign Affairs
1. U San Lwin, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Republic of Austria, presented credentials as Permanent Representative of the Republic of the Union of Myanmar to the United Nations and the International Organizations, located in Vienna, Austria in August 2015.
2. Ambassador U San Lwin presented his credentials to Mr. Yury Fedotov, Director General of the United Nations Office at Vienna (UNOV) and Executive Director of the United Nations on Drugs and Crime (UNODC) on 5th August 2015; Dr. Lassina Zerbo, Executive Secretary of the Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organization (CTBTO) on 17th August 2015; Mr. Taizo Nishikawa, Deputy Director General of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) on 18th August 2015 and Mr. Yukiya Amano, Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA) on 20th August 2015.
၁။ သြစတြီးယားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးစံလွင် သည် သြစတြီးယားနိုင်ငံ ဗီယင်နာမြို့တွင် ရုံးစိုက်သည့် ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများသို့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ခန့်အပ်လွှာများကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လအတွင်းက ပေးအပ် ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
၂။ သံအမတ်ကြီး ဦးစံလွင် သည် ဗီယင်နာမြို့၊ ကုလသမဂ္ဂရုံး၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာရုံး အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူ မစ္စတာ ယူရီဖီဒိုတော့ဗ် ထံသို့ (၅-၈-၂၀၁၅)ရက်တွင်လည်းကောင်း၊ နျူကလီးယား စမ်းသပ်ဖောက်ခွဲမှု အလုံးစုံ တားမြစ်ပိတ်ပင်ရေး စာချုပ်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း၏ အမှုဆောင်အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာလာဇီနာဇာဘို ထံသို့ (၁၇-၈-၂၀၁၅) ရက်တွင်လည်းကောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂစက်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့၏ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ တိုင်ဇို နိရှိကာဝါ ထံသို့( ၁၈-၈-၂၀၁၅) ရက်တွင်လည်းကောင်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဏုမြူစွမ်းအင် အေဂျင်စီ၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ယူကိရာအမာနို ထံသို့ (၂၀-၈-၂၀၁၅) ရက်တွင် လည်းကောင်း ခန့်အပ်လွှာများကို အသီးသီးပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်